IDA ithi Isilo sivumelana nayo kweyomhlaba | Isolezwe
IDA ithi Isilo sivumelana nayo kweyomhlaba
Izindaba / 12 March 2018, 7:27pm / KHAYA KOKO
IDA ithi ngeke inanaze ngokushintsha noma ukuchibiyela umthetho olawula umhlaba weSilo Ingonyama trust Act, uma ibona sengathi lomthetho uzovimba izinhlelo zayo zokuthuthukisa umhlaba wasemakhaya nokuwubuyisela kubantu.
Umholi weDA uMnuz Mmusi Maimane, uthe bazoyishintsha Ingonyama Trust Act uma benikwa ithuba lokuphatha izwe.
UMaimane ukhulume kanje izolo emuva kokuthi owayenguMengameli wezwe, uMnuz Kgalema Motlanthe waphakamisa ukuthi umthetho weNgonyama Trust kufanele uchintshiyelwe ukuze umhlaba ongaphansi kweSilo uzothuthukisa impilo yabantu basemakhaya.
Umthetho weNgonyama Trust waphasiswa ngo-1994 wuhulumeni waKwaZulu ukuze iSilo uGoodwill Zwelithini kaBheuzulu siphathe u-30% womhlaba ikakhulukazi osemakhaya KwaZulu-Natal.
Isilo yisona esiphethe umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust.
UMaimane uthe iSilo sivumelana neDA ukuthi umhlaba akufanele uphathwe nguhulumeni kodwa kufanele abantu banikwe ama-lease ngaphansi kweNgonyama Trust Board.
Uthe uma abantu benikezwa ama-lease esikhathi eside kusho ukuthi bazowukhokhela kwiNgonyama Trust Board.
"Sifuna Ingonyama Trust Board inikeze abantu ubunikazi bomhlaba. Uma ingahambisani nalokho sizocela iphalamende ukuthi lishintshe umthetho oyilawulayo," kusho uMaimane.
Ngesonto eledlule amalungu ephalamende athe afuna Ingonyama Trust ichaze ngezinhlelo zayo zokunikeza abantu ubunikazi bomhlaba esikhundleni sama-lease.
UNkk Thandeka Mbabama okhulumela iDA kwezokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya nomhlaba, uyigxekile ingonyama trust esho nokuthi ama-lease awabathuthukisi abantu basemakhaya.
"Ingonyama Trust kufanele inikeze abantu ubunikazi bomhlaba ukuze noma kufika inkampani ezomba okumbiwa phansi bahlomule. Kodwa uma umhlaba ungaphansi kweNgonyama Trust kusho ukuthi uma kufika izinkampani abantu abahlomuli ngalutho ngoba kukhokhelwa yona," kusho uNkk Mbabama.
UNkk Mbabama noMaimane batshele iphephandaba iThe Star ukuthi abahambisani nokuthatha komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo ngoba ukuba ngumnikazi womhlaba kuhambisana namalungelo esintu nentuthuko yezomnotho.
"Ukuthatha komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo yindlela kahulumeni yokweba umhlaba wabantu. Bese enza sengathi uzobathuthukisa ebe ezicebisa yena uhulumeni," kusho uMaimane.